Nagu saabsan - Nc Isa Warshadaha Iyo Shirkadda Ganacsiga
Dharka Capitol ee Dunida
Warshadda Dharka ee Magaalada Nanchang ee Duleedka Hongwei
ISAPPARELS waxaa loo yaqaan "Dharka Dharka Dunida", halkaas oo saddexda aag ee Horumarinta Dhaqaalaha Qaranka ay isku gooyaan. Sidaa awgeed helitaanka Agabka, Gaadiidka iyo Xoogsatada ayaa ka dhigaya goob ku habboon wax soo saar.
Waxaan aasaasnay ​​1998, oo ah "Warshadda Dharka Dharka ee Nanchang Xaafadda Hongwei". Sannadkii 2010, ISAPPARELS waxay ku bilaabatay sidii soo saaraha dharka tolidda iyo tolidda ee Nanchang Shiinaha.
Maanta, waxaan si toos ah isugu dhafan nahay soosaaraha dharka oo siinaya Dhar, Midabaynta, Goynta, Dawaarka iyo Daabacaadda iyadoo la raacayo heerarka tayada iyo kormeerka maamulka ee ISAPPARELS. Hada hadafkeenu waa in aan soo saarno dhar la soo baxa muuqaallo midabbo leh oo muuqaal leh, kuwaas oo aan waxyeello u lahayn aadanaha marka ay la kulmaan Heerarka Oeko-Tex ee SGS. Iyada oo leh kaydkeena 15 tan oo dhar ah, 8 khadad tolmo casri ah iyo 15 qalab mishiinada daabacan, kooxda ISAPPARELS waxay awood u leedahay inay bixiso 5-xiddig oo alaab tayo leh oo jawaab celin ah, iyo erey bixin degdeg ah oo brillian ah, oo ay ku jiraan naqshadaha 8hours gudahood ah, muunad qaadashada 5 maalmood gudahood, soo saar 15 maalmood gudahood.
Isku-dhafkan dhammaystiran wuxuu na siinayaa inaan macaamiisheena siino koontaroolidda tayada aan xaddidnayn oo ka hortagaya khataraha ka iman kara ganacsiyada caalamiga ah, si dhakhso leh u soo noqnoqoshada waqtiga kulanka suuq geynta iyo qiimaha tartanka. Waxaan bixinaynaa alaabada dharka oo ay ka mid yihiin funaanado, funaanado Polo, Hoodies, surwaal, Vest, Caps iyo Bags Intaa waxaa dheer, dhawaanahan waxaan xooga saaraynaa waxyaabaha xayeysiinta ah oo ay ka mid yihiin koofiyadaha, koobabka, dhalooyinka, dalladda iyo wixii la mid ah. Dhammaan alaabooyinka waa OEM, ODM ama Mid -Stop Service.
Waxaan khibrad u leenahay bixinta macaamiisha u baahan alaab-qeybiye adag iyo qiimeyn wax soo saar oo ay ka mid yihiin Disney, Marble, Universal Studio, Major League Baseball, Forever 21, Samsung, DHL kaliya magacow dhowr. Waa ujeedkeena ugu dambeysa ee ah in macaamiisheenu ay ku xirnaadaan suuqyadooda si ISAPPARELS ay ula xiriiraan macaamilka aan u shaqeyno. Waxaan ku faraxsanahay inaan haysano macaamiil badan oo qanciya oo aan u soo marinno adduunka oo ay ka mid yihiin Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe, Yurub iyo Australia.
Maamulaha WE SOO SAARKA SOO SAARKA & ADEEGA, ku soo dhawow ISAPPARELS.